Public Health in Myanmar: Some Health Behavior Theories - II
I wonder when we facilitate the change, is "SELF EFFICACY" is the first priority ??? Or Social norms first ? Or Enabling Environment first ? I don't know. I would like to hear your opinion sis.
self efficacy က တစ်ဦးချင်း စီမှာ တည်ဆောက်ပေးရတာ။
social norms က လူအုပ်စု တစ်ခုကို ပြောင်းရတာ။
enabling environment က ဘေးက လူတွေက ၀ိုင်းလုပ်ပေးရတာ။ ဒါပေမယ့် ကာယကံရှင်တွေလဲ ပါတာပေါ့။
မေးခွန်းရဲ့ အဖြေက အနေအထားပေါ် မူတည်တည်လို့ ပြောရမယ် ထင်တယ်။
enabling environment ရမှ social norms က ပြောင်းမှာ။ အဲဒါက လူတစ်ဦးချင် စီကို လိုက်ပြောင်းရတာထက် ပိုလွယ်ကူတယ်။ ပိုလဲ အကျိုး ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ဦးချင်းကိုလဲ self-efficacy တည်ဆောက်ပေးဖို့ကလိုတယ်။ theory တွေက တကယ်လက်တွေ့ အသုံးချတဲ့အခါမှာ ပေါင်းသုံးရတာတွေရှိတယ်။
အခုလုပ်နေတာတွေက အဲဒါတွေ အားလုံး တစ်ပြိုင်နက်ထဲ လုပ်နေတာပဲ ဟုတ်။
support group meeting တစ်ခုတည်းကို ကြည့်ရင်တောင် အဲဒါတွေ အားလုံး လုပ်နေတယ်လို့ ပြောလို့ ရတယ်။